ကျပ် တသိန်းဝန်းကျင် ဆင်းမ်ကတ်များ သုံးနိုင်တော့မည် | ဧရာဝတီ
မေရီကို| December 6, 2012 | Hits:1,529
18 | | ရန်ကုန်မြို့မှ မိုဘိုင်းဖုန်း ပြောနေသူ တဦး(ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက ကျပ် တသိန်း ၀န်းကျင်ရှိသည့် GSM နှင့် WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကတ်များကို လာမည့် နှစ် ဆန်း ပိုင်းတွင် စတင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဆင်းမ်ကတ်များ ရောင်းချခြင်းသည် တတိယအကြိမ်မြောက် ဈေးနှုန်းလျှော့ချခြင်း ဖြစ်ပြီး အခုရေ ၁.၂၆ သန်း ဖြန့်ဖြူးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မိုဘိုင်း အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထံမှ သိရသည်။
ယင်း ဖုန်း ဆင်းမ်ကတ်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် 3G ကွန်ရက်စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေးမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် အဆိုပါ ဖုန်းဆင်းမ်ကတ် လိုင်းပေါင်း တသန်း ကျော်ကို ရတနာပုံ တယ်လီပို့ တယ်လီကွန်း ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း ရောင်းချ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့်နှစ်အတွင်း စတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မည့် ဖုန်း ဆင်းမ်ကတ် ဈေးနှုန်းများသည် ကျပ် တသိန်း နှစ်သောင်း အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး ကျပ် ရှစ်သောင်းဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မိုဘိုင်း အင်ဂျင်နီယာချုပ် က ပြောကြားသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကတ် တခု၏ တန်ဖိုးကို ကျပ် ရှစ်သောင်းအထိ လျှော့ချပေးသည်ဟု ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံတကာ နှုန်းထားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် များစွာ မြင့်မားလွန်းနေသေးသည်ဟု ပြည်တွင်း ကွန်ပျူတာပညာရှင် တချို့က ပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ မိုဘိုင်း အင်ဂျင်နီယာချုပ်ကမူ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကတ် တခုကို ကျပ် တသိန်းနှင့် ရောင်းချရာတွင် ယခင် ဈေးနှုန်းဖြစ်သည့် ကျပ် ငါးသိန်းနှင့် ယှဉ်ပါက လေးသိန်း နစ်နာသဖြင့် နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ အဆများစွာ ထိခိုက်ကြောင်း ပြော ဆိုသည်။
ယခု မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကတ်တခုကို ကျပ်တသိန်းနှင့် ရောင်းချမည်ဆိုပါက ၀င်ငွေ ကျပ် သန်းနှင့်ချီ ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများမှာမူ ယနေ့အချိန်အထိ ညံ့ဖျင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နည်းပညာ နယ်ပယ်မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပညာရှင်များ၏ ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီးနောက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးနှုန်းများကို တကြိမ်တည်းဖြင့် အသက်သာဆုံးဖြစ်ရန် မဆောင်ရွက်ဘဲ တထစ်ချင်း လျှော့ချ လုပ်ကိုင်နေခြင်းကို သုံးစွဲသူများက စိတ်ပျက်နေကြသည့် အပြင် ဝန်ဆောင်မှု အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာပါက အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း မန္တလေး အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် တဦးကလည်း ပြောဆိုသည်။
ယခု လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူ ဦးရေမှာ သုံးသန်းကျော် ရှိကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သိရ သည်။
လွှတ်တော် သီးသန့် ရုပ်သံလိုင်း လွှင့်ရန် ကြိုးပမ်း
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်က ဆိုင်းငံ့သင့်
မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အတွက် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ
အလွတ် သတင်းထောက် ကိုပါကြီးကို အစိုးရ စစ်တပ် ဖမ်းဆီးထား
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Yoe December 6, 2012 - 1:48 pm	Even prostitutes in Cambodia are carrying two or three cell phones. It is still for the elite people in Burma. Whatashame!
Reply	bohmue December 6, 2012 - 2:10 pm	ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီးနောက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးနှုန်းများကို တကြိမ်တည်းဖြင့် အသက်သာဆုံးဖြစ်ရန် မဆောင်ရွက်ဘဲ တထစ်ချင်း လျှော့ချ လုပ်ကိုင်နေခြင်းကို သုံးစွဲသူများက စိတ်ပျက်နေကြသည့် အပြင် ဝန်ဆောင်မှု အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာပါက အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း မန္တလေး အခြေစိုက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် တဦးကလည်း ပြောဆိုသည်။
Reply	ohnmar December 6, 2012 - 3:13 pm	5သိန်းကနေ ၁သိန်းလျော့ရောင်းတာနိုင်ငံတော်ကနစ်နာတာလား ။ဆက်သွယ်ရေး
sim card ဖိုးတစ်သောင်းဘဲပေး၇တာကိုဘယ်ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိကမှနိုင်ငံတော်
Reply	swe htwe December 6, 2012 - 4:13 pm	That’s right. Shameful.
Reply	moejoo December 9, 2012 - 11:44 am	that right.i agree with this
Reply	kyi phyu December 6, 2012 - 10:02 pm	ရတနာပုံတယ်လီပို့မှကျပ်ငါးသိန်းဖြင့်ရောင်းချထားသော mc will ဖုန်းများကိုလစဉ်ကြေး ငါးထောင်ထပ်မံပေးဆောင်နေရမှုအားလျှော့ချပေးသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်..
Reply	s December 6, 2012 - 10:13 pm	ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖုန်း sim card တစ်ခုကို ထိုင်းဘတ်ငွေ 1 ဘတ်နဲ့ ဝယ်လို့ရတယ် မြန်မာငွေ 28 ကျပ်လောက်ပေါ့
Reply	komoe December 7, 2012 - 12:16 am	တိုင်ပြည်နစ်နာတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ
ခင်ဗျားတိုင်းပြည်တိုးတတ်ဖို့ ကိုဈေးနုံးတိုးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့တော်လိုက်တဲ့အရာရှိကြီးရာထူးတိုးဖို့ ပြောနေတာလား
Reply	kyi thar December 7, 2012 - 10:11 am	မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ မိုဘိုင်း အင်ဂျင်နီယာချုပ်ကမူ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကတ် တခုကို ကျပ် တသိန်းနှင့် ရောင်းချရာတွင် ယခင် ဈေးနှုန်းဖြစ်သည့် ကျပ် ငါးသိန်းနှင့် ယှဉ်ပါက လေးသိန်း နစ်နာသဖြင့် နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ အဆများစွာ ထိခိုက်ကြောင်း ပြော ဆိုသည်။
Reply	Hla Min Aung January 10, 2013 - 10:20 pm	Irrawaddy is an important for everyone.